Nanidy fety, kliobana ary fandrarana i Hanoi taorian'ny fihanaky ny COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Vietnam » Nanidy fety, kliobana ary fandrarana i Hanoi taorian'ny fihanaky ny COVID-19
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Vietnam
Nanambara ny talen'ny fitantanana ny tanànan'i Hanoi androany fa nasaina nikatona ny trano fisotroana, trano fisotroana ary klioban'ny tanàna ary norarana avokoa ny fivoriana lehibe rehetra nanomboka ny sasakalin'ny Alarobia. Ny fanamafisana ny fameperana ao an-drenivohitra Vietnam dia a Covid-19 valanaretina tao an-tanànan'i Danang.
“Tsy maintsy mihetsika isika izao ary mihetsika haingana,” hoy i Nguyen Duc Chung, filohan'ny Hanoi, tao anaty fanambarana iray. “Voarara ny fivoriana lehibe rehetra mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny.”
Nanampy ny lehiben'ny tanàna fa olona maherin'ny 21,000 izay niverina tany Hanoi avy any Danang "no harahi-maso akaiky ary handalo fitsapana haingana."
Hanoi dia nanoratra ny tranga voalohany momba ny Covid-19 izay mifandray amin'ny valanaretina Danang androany.